Free online encyclopedia. Did you know? page 367
Fivavahana tao Arabia talohanny fivavahana silamo
Fivavahana ao India
Filazam-potoana tsy hoavy
Fandrafetana ny fiteny
Filazam-potoana tsy lasa
Fiangonani Jesoa Kristy eto Madagasikara
Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito
Soratra Masinny Olomasinny Andro Farany
Fambolena ny mangahazo
Fiendrika anelanelany anoina
1835: Amand Struve - injeniera 1786: András Fáy - mpanoratra, mpanao politika, Poeta Philip Watts 1471: Albrecht Dürer - mpanao matematika Pierre-Karl Fabergé - mpamorona 1846 1816: Jacob Smith Jarmann - injeniera 1851 1848: Alberto Capilupi de G ...
I Jacques Hugues Sylla dia mpanao politika malagasy. Praiministri Madagasikara izy tamini Marc Ravalomanana filoha taminny Febroary 2002 hatraminny Janoary 2007. Filohanny antenimieram-pirenenana izy taminny 2007 hatraminny 2009. Teraka teo Nosy ...
Ny kolikoly, na tsolotra, na risoriso dia fifanarahana ratsy miseho eo aminny ankolafiny anankiroa, aminny alàlanny fanolorana fanomezana na vola tsy ara-dalàna ho tambinny asa na fanomezana tombondahiny anankiray tsy ara-dalàna ihany koa. Azo so ...
Ny ariary dia sandam-bola miasa ao amin ny Repoblikan i Madagasikara, efa niasa tamin ny andron ny mpanjaka tamin ny taonjato faha-19. Taorian ny nampiasana ny Franc Malagasy tamin ny Repoblika voalohany, dia nampiasaina ny Ariary. Io teny io dia ...
Eugen Baumann 1713: Pierre-Joseph Laurent - injeniera 1843: Marcel Deprez - injeniera 1818: Paul Octave Hébert - injeniera 1846 1766: Nikolaï Karamzine - Poeta, mpanoratra 1821: Gustave Flaubert - mpanoratra, mpanoratra tantara lava Stanisław Szc ...
Wikipedia dia tranonkala iraisam-pirenena Web azo ampiasaina maimaimpoana. Wiki izany no foibe mitahiry ny pejy rehetra, ary ny sehatra Wikipedia no toerana fijerena sy fanovana ny pejy rehetra. Ny teny hoe Wikipedia dia fitambaranny teny roa wik ...
Wikia dia sehatra mampiantrano tetikasa wiki maro noforonini Jimmy Wales sy Angela Beesley taminny taona 2004. Fitambarana tetikasa wiki marobe izay mampiasa rindrankajy MediaWiki izy io, ary ny orinasa Wikia, Inc. no mitantana azy. Maimaim-poana ...
WikiNi dia rindrankajy malalaka wiki anankiray fehezinny lisansy BSD manome fomba tsotra, mahomby sy haingana ahafahana mamorona sy mitantana sehatra iray aminny tranonkala na amina tranonkala anatina orinasa iray. Maimaim-poana izy sady azo ovai ...
WikkaWiki dia Rindrankajy wiki iray tena kely habe, fanaovana sehatra aminny tranonkala, nosoratana taminny PHP ary mampiasa banky angona MySQL hitehirizana ny pejy. Iray aminireo solofonilay rindrankajy WakkaWiki izy, fa nampiana singa maro hafa ...
DokuWiki dia rindrankajy wiki iray nosoratani Andreas Gohr taminny PHP ho fanampiana ireo orinasa mila fitaovana hanamboarana documentation. Tsy mila banky angona izy satria anaty rakitra teksta tsotra no tehiriziny ny votoatinny pejy. Mitovitovy ...
Ny skin Voasintona Fijerena Hamaky Hanova ny fango Hijery ny tantara Plus Tadiavo Fitetezana ny wiki Fandraisana Wikipedia finday Pejy rehetra Pejy vaovao Pejy kisendra Fikambanana Toerana iombonana Niorina taminny 1951 izy io nataoni Robert O. P ...
Avy aminy ratsanny gupta ny fanoratana devanagari, ilay ratsana gupta dia avy aminny fomba fanoratana Brahmî ny soratra devanagari. Aminizao tontolo izao, ny fanoratana devanagari no tena miasa indrindra any Indy, ary io no soratra ampiasainny ol ...
Ny Wikispecies dia an-tserasera wiki-tetikasa tohananny ny Wikimedia Foundation. Ny tanjona dia ny hanangana ny heviny lisitry ny maimaim-poana afa-po ny rehetra isan-karazany, ary dia natao bebe kokoa tao ny mpahay siansa noho ny ankapobeny. Mia ...
I Jimmy Wales, avy aminny anarany Jimmy Donal Wales, tenenina hoe Jimbe Wales, teraka taminny 7 Aogositra 1966 tany Huntsville, Alabama, dia mpivarotra Amerikanina. Anisanny mpamorona ny FAI Bomis sy ny raki-pahalalàna malalaka wiki tsy andoavam- ...
Yurok aminy teny yurok dia midika "mponina ambandreninrano". Io dia mponina amerindianina efa teo nisy 10.000 taona izay eo amorontsiraka ny kalifôrnia. Taminatongavani Eoropeanina eo aminilay faritany taminyu taona 1850 amilay misy volamena ny Y ...
1787: Semion Korsakov - mpamorona Petras Vileišis - injeniera, mpanao politika 1812: Charles Grafton Page - mpahay fizika, mpamorona 1736: Joseph-Louis Lagrange - mpanao matematika, mpahaikintana, mpahay fizika, mpanao politika 1627: Robert Boyle ...
1711: Abraham Roentgen - injeniera 1814: Ferdinand Schichau - injeniera Cristiano Lobbia - injeniera, mpanao politika Auguste de Maere 1710: Raimondo di Sangro - mpamorona 1761: George Murray - mpamorona 1818: Artúr Görgey - injeniera, mpanao pol ...
1834: Philipp Reis - mpahay fizika, mpamorona 1889: Arthur Hartley - injeniera sivily, injeniera 1827: Sandford Fleming - injeniera 1825: Julius Erasmus Hilgard - injeniera 1800: Millard Fillmore - mpanao politika 1899: Beniamino Fiamma - injenie ...
Ott Christoph Hilgenberg - injeniera, mpahay siansa 1868: Kantarō Suzuki - mpanao politika Imre Korányi 1849: Edmund Barton - mpanao politika 1826: Joseph William Trutch - injeniera 1689: Montesquieu - filôzôfy, mpanoratra, mpanoratra tantara lav ...
1931: José Luis Jordán Peña - injeniera 1786: Pierre-Dominique Bazaine - mpanao matematika, injeniera sivily, injeniera 1794: Prosper Garnot - Dokotera, mpahaisiansan-javaboahary 1828: J. P. Knight - injeniera 1935: Mauro Forghieri - injeniera 18 ...
1850 1716: Pierre Marie Jérôme Trésaguet - injeniera sivily, injeniera 1840: Eduard Locher - injeniera, mpamorona 1813: Yvon Villarceau - mpahaikintana, mpanao matematika, injeniera 1763: François-Joseph Talma - mpilalao, mpitsabo nify 1821: Mars ...
1855: John Moses Browning - mpamorona 1734: Wolfgang von Kempelen - injeniera, mpanoratra, mpanoratra tantara tsangana Frank Shuman - injeniera, mpamorona 1783: Stendhal - mpanoratra, mpanoratra ny tantaranny fiainany 1832: Édouard Manet - 1780: ...
1881: Charles Joseph Newbold - injeniera 1906: Cai Chusheng - talen-koronantsary, mpanoratra senariô 1729: Edmund Burke - mpanao politika, filôzôfy, mpanoratra 1867: Wilhelm Dieck - mpitsabo nify 1941: Christoph Höhne - mpaka sary Ottmar Hitzfeld ...
Titus Maximilien Huber - injeniera Edmund Rumpler 1839: Carl Humann - injeniera 1809: Louis Braille - mpitendry mozika, mpamorona 1781: John H. Hall - mpamorona 1862: D. E. Marsh - injeniera 1836: Ernest Mercadier - injeniera 1776: Jean-Baptiste ...
18.483330°S 47.250000°E ﻿ / -18.483330; 47.250000 I Fonohasina dia vohitr andriana masina sy manan-tantara aty Imerina, miorina eo tehezan ny alahamaditanin Ambohidrabiby. Ny Andriandoriamanjaka no tompon io vohitra io. Rehefa nilamina ny tany di ...
Imerina efa-toko dia ny fizaràna ho faritra efatra an Imerina tamin ny andron Andriamasinavalona, ka ireo faritra ireo dia nampanapahiny ny zanany efa-dahy. Tamin ny andron Andrianampoinimerina, dia niova ho Imerina enin-toko izany. Andrianavalon ...
I Avaradrano dia iray amin ireo fizaràna an Imerina ho efa-toko tamin ny andron ny mpanjaka merina Andriamasinavalona na enin-toko nanomboka tamin ny andron Andrianampoinimerina, ka izy no nalaza indrindra tamin ireo faritra ireo. Ny fizaràna dim ...
Rabiby dia mpanjaka tao Anjozorobe taminny taonjato faha-16, raiben-d Ralambo tamin-dreniny. Hatraminny taonjato faha-16 taorian i J.K, dia maro ireo zanakandriana sy fianakavianny mpanjaka aminny faritri Arabia no niala tany Arabia noho ny ady a ...
Ny Andrianamboninolona dia andriana merina, taranak Andrianamboninolona, rahalahin-dray no rafozan ny mpanjaka Ralambo. Iray amin’ ireo antanantohatr’ andriana fito nisy tao Imerina talohan’ ny taona 1896 izany. Atao hoe Zanakambony koa izy ireo” ...
Ny Andriandranando na Zanadranando dia andriana merina nipoitra tamin ny mpanjaka Andriandranandobe. Avy amin ny faritry ny ala antsinanana izy no niakatra taty Imerina ankehitrio izy mba hitady zara-tany hanjakana. Tsy nataon-dRalambo ho isan ny ...
Ny Zazamarolahy dia sokajin andriana tamin ny nanasokajiana azy ireo, ka tamin ny voalohany, dia ireo taranak izy efa-dahy, zanaky ny mpanjaka Andriamasinavalona, nanjaka teo Antananarivo sy Imerina Atsimo, tao Ambohidrabiby sy Mandiavato, Ambohi ...
Ny hasina dia hazo lava taho ka eny aminny lohany no mivangongo ireo ravina maro somary lava mahia. Ity hazo hasina ity moa any amorontsiraka sy any anala no maniry sy mijoalajoala tokoa fa aty Imerina kosa dia saika nambolena aminny tanànanny Nt ...
Andriandranandobe dia mpajaka merina niaina tamin ny taonjato faha-16, razambe nipoiran ny terak Andriandranando, atao koa hoe Andriandranando na Zanadranando. Avy amin ny faritry ny ala atsinanana izy no niakatra taty Imerina ankehitrio izy mba ...
Hasina (hery tsy hita maso)
Ny hasina dia hery tsy hita maso ka ireo andriana, mpanandro, mpisikidy ary ireo zavaboaharin Andriamanitra toy ny zazavavindrano, kalanoro, vazimba, ireo sampy, sns.izay afaka manova ny fiainanny olombelona no heverinny ntaolo ho manana azy. Ny ...
Martin Lotera dia teôlôjiana alemàna isan ireo nitarika ny Fanavaozam-piangonana na Reformasiona prôtestanta tamin ny taonjato faha-16, teraka tamin ny 10 Novambra 1483 tao Eisleben ary maty tamin ny 28 Febroary 1546 tao Eisleben ihany koa. Ny fa ...
Aborijina ny Aostralia
Hozy ny Aostralianina, ny olona Aborijina: raha olona miteny hoe aborijina izy raha miaiky ny mponina aborijina hoe aborijina izy. raha olona manana razana Aborijina Tsy maintsy tokony feno ireo fiapetra telo ireo ; aminy dika ofisialy, aborijina ...
Ny akanga dia vorona mitovitovy endrika sady iray karazana aminny akoho sy ny vorombola, fa izy somary kely loha sady manana volo mainty mipentipentina fotsy. Maro karazany ny akanga ka ny sasany fiompy fa sasany hafa akangadia. Miara-monina sy m ...
Ny Vezo dia foko malagasy moninina any amin ny morontsiraka atsimo-andrefan i Madagasikara izay mivelona indrindra amin ny fanjonoana an-dranomasina. Zana-bondrona ao amin ny foko sakalava izy ireo.
Ny Antandroy na Tandroy na Ntandroy dia vondrom-poko ao amin ny faritra atsimo indrindra eto Madagasikara, monina eo anelanelan ony Menarandra ao andrefana sy Mandrare ao atsinanana ary ny havoana Vohimainty ao avaratra. Any amin ny Faritra Andro ...
Ny Antanosy na Tanosy dia vondrom-poko ao amin ny tendro atsimo-atsinanan i Madagasikara dia ny faritra Anosy izany izay misy an i Taolagnaro, eo anelanelan i Masianaka sy Mandrare no misy azy betsaka indrindra, nefa ahitana azy koa ny tanàna toa ...
Ny Masikoro dia foko malagasy any amin ny morontsiraka atsimo andrefan i Madagasikara izay mivelona indrindra amin ny fiompiana sy ny fambolena. Anisan ireo vindrom-poko ao amin ny tapany atsimo-andrefan i Madagasikara ny Masikoro. Manakaiky ny V ...
Razana (finoana malagasy)
Ny razana, araka ny finoan-drazana malagasy, dia ireo olona efa maty nefa heverina ho hery mpanao soa eo aminny fiainanny velona. Ny Malagasy sasany dia mihevitra fa ny fanahinny razana dia mety manjary angatra raha tsinontsinoavina na atao ratsy ...
Ny Filazantsarani Jodasy na Evanjelini Jodasy dia soratra natao tokony ho taminny taonjato faharoa. Tsy hita ao aminny Baiboly izany soratra izany ka isanireo atao hoe Filazantsara apokrifa. Tao aminny fikambananolona efa kristiana nefa nanana fi ...
Tenin-jatovo midika:miteny mivadika.Samy manana ny vany mitetikany ny tarika tsirairay.Ny tariky ry Bob zao raha milaza ho:"Lembona botsy" dia midika izany hoe I Bobna letsy.Ohatra hafa:"Kezazaly" midika zazakely."Sipa mampigadra satria mbola kez ...
Ny olikaratra dia vondrona fela elektirônika mifandray matetika aminny alàlanny olikaratra voatonta ary ny tanjony dia manao asa iray. Izay ny antony iheverina ny olikaratra fa boaty maintsy misy: Fidiranny aratra famelomana azy, Fivoahana tokana ...
Ny restaorasionisma na restorasionisma dia finoana ny tokony hamerenana ny fivavahana kristiana amin’ny finoany sy ny fanaony tany amin’ny taonjato voalohany. Ny restaorasionisma koa dia finoana ilazana ny tena ho mpamerina ny fivavahana kristian ...
Ny abidy arabo dia abjady, izany hoe abidy tsy ahitana afa-tsy renisoratra, natao hanoratana ny fiteny arabo sy fiteny hafa koa, ka soratana avy ankavana miankavia. Nisy litera miisa 28 izy taminny voalohany nefa ny fiteny tsirairay izay soratana ...
Ny vola dia vita aminny taratasy na metaly atontanny fanjakana, ary manan-kery ao aminio tany io mba ho sandanny entana vidiana. Ny fanjakanny tany tsirairay avy dia manamarika ny volany aminny sary sy soratra mba hampiavaka azy ireo. Manana ny a ...
Ny voanjo dia nosokafana taminny fomba tantanana taminny alàlanny tantanana sy vatan-kazo, vita aminny vato matetika. Ny voanjo sasany toy ny kennuts dia azo sokafana aminny tànana ihany koa, aminny alàlanny fihazonana ny voanjo ao aminny felatan ...
Fivavahana tao Arabia talohanny fivav ..
Fiangonana Adventista Mitandrina ny A ..